Serivisy - Yino International Co., Ltd.
Beauty & makiazy
Kilalao an'ny ankizy
Vokatra fampiasana isan'andro
Vokatra fisorohana ny valanaretina
asa tanana & fanomezana
vokatra biby fiompy
fanatanjahan-tena sy fialam-boly
Fanangonana fampahalalana & fitarihana tsena
nanangona karazana fampahalalana samihafa momba ny mpamatsy izahay. Ary manana zavatra matihanina miteny mahay fiteny amin'ny firenenao izahay afaka mitarika anao amin'ny tsena.
Ny mpiasa matihanina momba ny fividianana mpiasa dia hanome anao fampahalalana sarobidy ao anatin'ny fotoana fohy izay misy ny vidin'ny EXW avy amin'ny mpamatsy, MOQ, famolavolana, fotoana fandefasana, fifehezana kalitao, lozisialy, fahazoan-dàlana amin'ny fadin-tseranana sns.
Ho an'ny vokatra namboarina dia afaka manome santionany izahay hanamafisana. Ary mijery ny fironana amin'ny tsena koa izahay ary manolotra santionany vaovao ho anao.
Ny mpividy matihanina izay mahalala tsara ny tsena dia hitarika anao amin'ny tsena. Mampitaha ny kalitao sy ny vidiny, misafidy mpamatsy mora sy haingana ary tehirizo ny fotoana laninao.
Hanaraka tsara ny santionany izahay hijerena ny entana.Raha mividy vokatra matihanina toy ny masinina ianao dia hahita zavatra matihanina avy amin'ireto faritra ireto hanaovana ny QC. Ary omena anao ny tatitra fanaraha-maso, aorian'ny fanamafisana anao dia hanomboka hanao ny fizotran'ny fandefasana izahay.
Efitra 70298, rihana faha-5, distrikan'ny tsenan'ny varotra iraisam-pirenena 5, Tanànan'i Yiwu, Zhejiang, Sina.
Karazana ampinga tarehy
Torohevitra momba ny fametrahana asa-tanana
Ahoana ny fikojakojana firavaka volamena nopetahany takela?